Fivorian'ny mpanohitra :: Manomana fihetsiketsehana an-dalambe ny RMDM • AoRaha
Nanapa-kevitra ny hanomana hetsika lehibe ireo andiana mpanao politika goaika antitra nivory tao amin’ny foiben’ny antoko Tiako i Madagasikara eny Bel’Air, afak’omaly. Miandry ny fahavitan’ny fihibohana ny mpanohitra dia hanao hetsika eny an-dalambe, araka ny tapak’izy ireo.
Nanakiana ny mpitondra amin’ny voalazan’izy ireo fa tsy fahaiza-mitantana ny krizy ara-pahasalamana ny mpanohitra. Isan’ireo fehinkevitra nandritra io fivoriana io ny filazana fa tsy fanajan’ny mpitondra ny fisaraham-pahefana ka mahatonga ny tsy fahatokisan’ny vahoaka.
Tsy fisian’ny mangarahara amin’ny fitantanam-panjakana, tsy fanajana zon’olombelona, fisondrotan’ny tahan’ny kolikoly, tsy fisian’ny fahafahana maneho hevitra fa indrindra fanamparam-pahefana ataon’ny mpitondra, ireo rehetra ireo no isan’ny hevi-dehibe voaresaka tao amin’ilay fikaonandoha nataon’ireo mpanohitra ity.
« Manameloka ireo rehetra ireo izahay. Indrindra ny tsy fanajana ny zon’olombelona. Tsy azonay ekena ny fampiasana ny Fitsarana sy ny mpitandro filaminana ho fitaovana politika hamoretana ny mpanohitra. Mitaky ny fahalalana maneho hevitra, fahalalan’ny asa fanaovan-gazety ary fanokafana ny haino amanjerim-panjakana amin’ny mpanohitra izahay », hoy ny famintinana ny fakan-kevitra tapak’ireo mpanao politika mpanohitra.